Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Thursday, October 21, 2010 Thursday, October 21, 2010 Labels: သုတအဖြာဖြာ
လက်ကိုင်ဖုန်းအသုံးပြုသူများအနေနဲ့ သိမှတ်ဖွယ် ဆောင်ရန်ရှောင်ရန် တစ်ချို့ကို ကျွန်မ ရှာဖွေ ဖတ်ရှုမိတာလေး ပြန်လည် ဝေမျှပေးချင်ပါတယ်..
၁. ကလေးများကို အရေးပေါ်ကိစ္စမှ တစ်ပါး အခြားကိစ္စများအတွက် လက်ကိုင်ဖုန်း အသုံးပြုခွင့် မပေးသင့်ပါ။ ကလေးများ၏ ဦးခေါင်းခွံသည် လူကြီးများနှင့်စာလျှင် အလွန်းပါးလွှာပြီး ဦးနှောက်တွင်လည်း လူကြီးထက်စာလျှင် အရည်ပါဝင်မှု ပိုမို များပြားသောကြောင့် လက်ကိုင်ဖုန်းမှ ထုတ်လွှင့်သော လျှပ်စစ်လှိုင်းများမှာ ကလေးများ၏ ဦးနှောက်အတွင်းသို့ အလွယ်တကူ လျှင်မြန်စွာ ဖြတ်သန်းသွားလာနိုင်ခြင်းကြောင့် ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေကို ပိုမိုမြင့်တက်စေနိုင်ပါသည်။ သင်၏ကလေးတွင် လက်ကိုင်ဖုန်း ရှိနေပါကလည်း ၄င်း လက်ကိုင်ဖုန်းကို ခေါင်းအုံးအောက်တွင် ထား၍ အိပ်စက်ခြင်းကို အထူးရှောင်ကျဉ်စေလိုပါသည်။
ဦးနှောက်ကင်ဆာဖြင့် သေဆုံးသူ ကလေးအရေအတွက်သည် အခြားကင်ဆာဖြင့် သေဆုံးသော အရေအတွက်ထက် ပိုမိုမြင့်မားလျှက် ရှိနေပါသည်။ ( Sydney TV News Report)
ဦးနှောက်ကင်ဆာသည် အသက်၁၅နှစ်အောက် ကလေးများနှင့် အသက် ၃၄နှစ်အောက် လူငယ်များအတွက် ဒုတိယ သေနှုန်းအများဆုံး ရောဂါတစ်ခု ဖြစ်လာနေပါသည်။ ( Neurologychannel.com)
၂.ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင်လောင်းများ (သို့မဟုတ်) ကိုယ်ဝန်ရှိနေသည်ဟု သံသယ ဖြစ်သောသူများ လက်ကိုင်ဖုန်းဖြင့် ဖုန်းပြောခြင်းကို ရှောင်ကျဉ်သင့်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် မိခင်၏ ကိုယ်တွင်းရှိ ဖွံ့ဖြိုးဆဲ သန္ဓေသားလောင်းသည် အလွန်နူးညံ့ သိမ်မွေ့လွန်းသောကြောင့် လက်ကိုင်ဖုန်းမှ ဖြာထွက်လာသော လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းများသည် ၄င်း ဖွံ့ဖြိုးစ သန္ဓေသားလောင်းအား ဆိုးကျိုးဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ ကလေးငယ်လေးများကို ပွေ့ပိုက်ထားရင်းဖြင့် သော်လည်းကောင်း၊ လွယ်ပိုးထားရင်းဖြင့်သော်လည်းကောင်း လက်ကိုင်ဖုန်းပြောခြင်းကိုလည်း ရှောင်ကျဉ်သင့်ပါသည်။ မလွှဲမရှောင်သာသော အရေးပေါ်ကိစ္စများတွင်သာ တိုတိုနှင့်လိုရင်းသာ ပြောဆိုသင့်ပါသည် ။
၃. လက်ကိုင်ဖုန်းကို အချိန်ကန့်သတ်ပြီးမှပြောပါ။ အချိန်ကြာကြာ ပြောခြင်းကို ရှောင်ကျဉ်ပါ။ အချိန်ကြာကြာပြောလေ ဦးနှောက်ကင်ဆာ၊ မျက်စိကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်ခြေ ပိုများလေ ဖြစ်သည်ဟု သိရပါသည်။ လက်ကိုင်ဖုန်းဖြင့် စကားပြောလျှင် တိုတိုနှင့် လိုရင်းပြောကျင့် ပြုလုပ်ပါ ။ ဖုန်းပြောချိန် ကန့်သတ်ခြင်းသည် သင်၏ ငွေကြေးကိုသာ အကုန်အကျ သက်သာစေသည်မဟုတ်။ သင်၏ ကျန်းမာရေးကိုလည်း ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရာ ရောက်ပါသည်။
၄. သင်၏လုပ်ငန်းခွင်နှင့် အချိန်ကြာကြာ စကားပြောရသည့် နေရာများအတွက် ရိုးရိုးကြိုးဖုန်းကိုသာ အတတ်နိုင်ဆုံး အသုံးပြုပါ။ ကြိုးမဲ့ cordless ဖုန်းများသည်လည်း လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်း ဖြာထွက်မှု အလွန်မြင့်မားပြီး အသုံးမပြုချိန်မှာတွင်ပင် လှိုင်းများ ဖြာထွက်နေဆဲ ဖြစ်ပါသည်။
၅.လက်ကိုင်ဖုန်းကို ခန္ဓာကိုယ်နှင့် ဝေးနိုင်သမျှ ဝေးဝေးထားပါ။ ဖုန်းပြောလျှင်လည်း မိမိဦးခေါင်းနှင့် အနည်းဆုံး ၂လက်မခန့်ခွာ၍ ပြောခြင်းဖြင့် ဦးနှောက်သို့ လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းများ ရောက်ရှိခြင်းကို ၇၅%နှုန့်ခန့် ကာကွယ်ပြီးသား ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ ဒေါက်တာ ဂျော့ခ်ျကားလို၏ အကြံပေးချက်မှာ လက်ကိုင်ဖုန်းကို မည်သည့်အချိန်တွင်ဖြစ်စေ ကိုယ်ခန္ဓာနှင့် အနည်းဆုံး ၆လက်မ ၇လက်မခန့် ဝေးဝေးထားခြင်းသည် အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါသည်။
၆. အပြင်သွားလျှင် လက်ကိုင်ဖုန်းကို ခါးပတ်တွင် ချိတ်သွားခြင်း၊ လက်တွင်းကိုင်ဆောင်သွားခြင်း၊ အင်္ကျီအိတ်ထောင်များအတွင်း ထည့်သွားခြင်းတို့ကို ရှောင်ကျဉ်သင့်ပါသည်။ ၀မ်းဗိုက်ရှိ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ရှူးများသည် ဦးခေါင်းထက်ပို၍ လျှပ်စစ်လှိုင်းများကို ပို၍လျှင်မြန်စွာ စုပ်ယူနိုင်စွမ်းရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် အမျိုးသားများတွင်လည်း ကလေးရရှိရန် အခွင့်အရေး နည်းပါးခြင်းမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ မဖြစ်မနေ အိတ်အတွင်းထည့်ယူသွားဖို့ လိုအပ်လာလျှင် လက်ကိုင်ဖုန်း ကီးပက်( Key Pad) ကို ခန္ဓာကိုယ်နှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင် အနေအထားတွင် ထား၍ သယ်ယူသွားခြင်းက ဖုန်းအဲန်တင်နာနှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင် မဖြစ်စေနိုင်တော့ပါ။
၇. လက်ကိုင်ဖုန်းပြောလျှင် နားကြပ်များအသုံးပြုခြင်း၊ လက်ကိုင်ဖုန်းမှ သီချင်းများကို နားကြပ်ဖြင့် အချိန်ကြာမြင့်စွာ နားထောင်ခြင်းတို့သည်လည်း လက်ဖြင့်ကိုင်၍ ဖုန်းပြောခြင်းထက် သုံးဆပိုပြီး နားနှင့် ဦးနှောက်ကို လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းများ ပြင်းထန်စွာ ထိခိုက်စေနိုင်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် လက်ကိုင်ဖုန်းများအတွက် ထုတ်လုပ်ထားသော နားကြပ်များမှာ အဲန်တင်နာသဖွယ် ဖြစ်စေသောကြောင့် လျှပ်စစ်လှိုင်းများမှာ နားအတွင်းသို့ တိုက်ရိုက် ၀င်ရောက်နိုင်သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် လက်ကိုင်ဖုန်းဖြင့် နားကြပ်ကိုအသုံးပြု၍ သီချင်းနားထောင်ခြင်းကို ရှောင်ကျဉ်သင့်ပါသည်။
၈. ဖုန်းပြောလျှင် နားနှင့် တိုက်ရိုက်ကပ်ပြောခြင်းထက် စပီကာဖွင့်၍ ပြောခြင်းက သင့်အတွက် ပို၍ အန္တရာယ်ကင်းစေနိုင်ပါသည်။ ခန္ဓာကိုယ်နှင့် ဝေးနိုင်သမျှ ဝေးခြင်းသည် မိမိကျန်းမာရေးအတွက် စိတ်အချရဆုံး အနေအထား ဖြစ်ပါသည်။ ဘလူးတု(ခ်ျ)ကို အသုံးပြု၍ ဖုန်းပြောခြင်းသည် လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်း ဖြာထွက်ခြင်း အပုံတစ်ရာလျှင် တစ်ပုံသာ ရှိတော့သည်ဟု ဆိုသော်လည်း ဘလူးတုခ်ျကို အသုံးပြုခြင်းသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည် ဟူ၍တော့ မပြောနိုင်ပေ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဘလူးတုခ်ျကို အသုံးပြုလျှင် လျှပ်စစ်လှိုင်းများမှာ နားသို့တိုက်ရိုက် ၀င်ရောက်နိုင်သဖြင့် အသုံးပြုသူများ စဉ်းစားဖွယ် ဖြစ်ပါသည်။
၉.သတ္တုဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော အလုံပိတ်အခန်းများ ဓာတ်လှေကား၊ လေယာဉ်ပျံ၊ မီးရထား၊ မြေအောက်ရထား၊ စက်ကိရိယာများ အတွင်းစသည်တို့နှင့် အခြား သတ္တုအဆောက်အဦးများတွင် လက်ကိုင်ဖုန်းပြောခြင်းကို ရှောင်ကျဉ်သင့်ပါသည်။ သတ္တုအဆောက်အဦး အလုံပိတ်များသည် လျှပ်စစ်လှိုင်းများအား ၄င်းတို့ထဲတွင် လှောင်အိမ်သဖွယ် ပိတ်မိနေစေကာ သင်နှင့် အခြားသူများအား ထိခိုက်နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ၄င်းနေရာများတွင် ရောက်ရှိနေပါက လက်ကိုင်ဖုန်းကို ပိတ်ထားသင့်ပါသည်။
၁၀.ဆက်သွယ်မှုဧရိယာ ကောင်းမွန်စွာ မိသော နေရာတွင်သာ ဖုန်းပြောသင့်ပါသည်။ လိုင်းကောင်းစွာ မမိသောနေရာ၊ အရှိန်ဖြင့်သွားလာနေသော ကား၊ ရထား၊ လေယာဉ်ပျံ၊ မြေအောက်ရထား တို့ပေါ်တွင် ဖုန်းပြောခြင်းကို ရှောင်ကျဉ်သင့်ပါသည်။ ယင်းကဲ့သို့ အမြန်ပြေးလွှားနေသော နေရာများပေါ်မှ ဖုန်းပြောပါက အနီးဆုံး တယ်လီဖုန်းစတေရှင်သို့ ဆက်သွယ်နိုင်ရန် လက်ကိုင်ဖုန်းသည် ပါဝါပို၍ စိုက်ထုတ်ရသောကြောင့် လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်း ဖြာထွက်မှု ပိုမိုများပြားပါသည်။
၁၁.ညအိပ်ချိန်တွက် လက်ကိုင်ဖုန်းကို ပိတ်ထားသင့်ပါသည်။ လက်ကိုင်ဖုန်း၊ လျှပ်စစ်နာရီ၊ နိုးစက်နှင့် လျှပ်စစ်ပစ္စည်း အသုံးအဆောင်များမှ ဖြာထွက်သော လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းများသည် သင်၏ အိပ်စက်ခြင်းကို အနှောက်အယှက် ပေးနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အိပ်စက်ချိန်တွင် လက်ကိုင်ဖုန်းကို ပိတ်ထားခြင်း၊ အခြား လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများအားလည်း မိမိနှင့်ဝေးရာနေရာ(အနည်းဆုံး ၆ပေခန့်အကွာ)တွင် ထားသင့်ပါသည်။
လက်ကိုင်ဖုန်း အသုံးပြုခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိမရှိဆိုတာ နိုင်ငံအချို့မှာ အငြင်းပွားနေကြဆဲ ဖြစ်ပါတယ်.. တယ်လီဖုန်းထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကြီးတွေကတော့ သူတို့ စီးပွားရေးကျဆင်းမှာ စိုးတဲ့အတွက် လက်ကိုင်ဖုန်းဟာ ဘာအန္တရာယ်မှ မရှိကြောင်း ခုခံပြောဆိုနေကြပေမဲ့ အသက်ကို ဥာဏ်စောင့်၍ မိမိကျန်းမာရေးကို ကာကွယ် စောင့်ရှောက်နိုင်ကြပါစေရှင်။
(Important Tips for Cell Phone Users) Source from Funzug.com
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Saturday, October 16, 2010 Saturday, October 16, 2010 Labels: ရသစာစုများ
ဂျက်သည် ဘ၀ရဲ့အောင်မြင်မှုအတွက် လှုပ်ရှားရုန်းကန်ရင်း အလုပ်ထဲမှာဘဲ အချိန်တွေကို မြုပ်နှံထားသူတစ်ယောက် ဖြစ်နေခဲ့သည်။ မွေးရပ်မြေသို့ပင် မရောက်နိုင်တာ အတော်ကြာခဲ့ပြီ။ သူ့ဘ၀တွင် အတိတ်အကြောင်း စဉ်းစားဖို့ အချိန်အနည်းငယ်မျှ မရှိသလို သားနှင့် ဇနီးအတွက်ပင် အချိန် မပေးနိုင်လောက်အောင် အလုပ်အာရုံထဲ ဇောကပ်လို့ နေခဲ့သည်။ ယခုထက် ပိုမိုမြင့်မားသော ဘ၀အခြေအနေ၊ ယခုထက် ပိုမိုအောင်မြင်သော သူတစ်ယောက်ဖြစ်ရန် စသည့် မျှော်မှန်းချက်များဖြင့်သာ သူ့ဘ၀ကို ရှေ့ဆက်သွားနေခဲ့သည်။ ကျန်သည့်အရာများအတွက် အချိန်ပေးဖို့ကို သတိမရသလို မပေးနိုင်အောင်လည်း အလုပ်သံသရာမှာ ၀ဲလည်နေခဲ့သည်။
တစ်ရက် သူ့မွေးရပ်မြေတွင် နေထိုင်သူ မိခင်ထံမှ သူ့ဆီ ဖုန်းဝင်လာခဲ့သည်။ “သားရေ.. ဘေးအိမ်က အန်ကယ် ဘယ်လ်ဆာ တော့ မနေ့ညက ဆုံးသွားတယ်ကွယ်.. ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာ သူ့အသုဘချလိမ့်မယ်.. ” မေမေ ပြောမှ သူ့ငယ်ဘ၀တစ်ချို့အကြောင်း အတွေးထဲ ဖြတ်ခနဲ ၀င်ရောက်လာရင်း တစ်ချို့အဖြစ်ပျက်တွေကို ဆက်တိုက် သတိရမိသွားတော့ သူတဒင်္ဂ တိတ်ဆိတ်သွားမိတော့သည်။ အန်ကယ် ဘယ်လ်ဆာ.. သူ့အပေါ်မှာ အမြဲတမ်း စိတ်ရှည်လက်ရှည် သင်ကြားပြသဖို့ ၀န်မလေးတတ်ခဲ့သူ။ သူ့တွင် ငယ်ငယ်ကတည်းက ဖခင်မရှိသဖြင့် ဘေးအိမ်က အန်ကယ်ဘယ်လ်ဆာ အိမ်တွင်သာ သူငယ်ဘ၀အချိန်တွေ ကုန်လွန်ခဲ့သည်က များသည်။ အန်ကယ်က သူ့ကို ချစ်ခင်လှသလို ဘ၀အတွက် သင်ခန်းစာ ယူစရာများ ၊ လေ့လာစရာများ အတွက် ညွှန်ပြရာတွင်လည်းကောင်း၊ လမ်းကြောင်းပေး ဆုံးမရာတွင်လည်းကောင်း အလွန်တော်ပါသည်။
“သား… ဂျက် မေမေပြောတာ ကြားရဲ့လား” ဖုန်းထဲမှ မေမေ့အသံ ခပ်ကျယ်ကျယ်ကို ပြန်ကြားရမှ လက်ရှိပစ္စုပ္ပန် အချိန်ကို သူ့အသိစိတ်က ပြန်ရောက်လာရတော့သည်။ “အိုး ဆောရီး မေမေ .. ကျွန်တော် ကြားပါတယ်.. ကျွန်တော် သူ့ကို သတိမရတာ တော်တော်ကြာပြီ မေမေရယ်.. ၀န်ခံရရင် သူဆုံးသွားတာကြာပြီလို့တောင် ကျွန်တော် ထင်ခဲ့မိတာ ” သူပြန်ပြောမိတော့ မေမေက “ သားက သတိမရပေမဲ့ အန်ကယ် ဘယ်လ်ဆာက သားကို ဘယ်တော့မှ မမေ့ဘူးသား… မေမေ့ကို တွေ့တိုင်း သူက သားဘာတွေလုပ်နေလဲ၊ အဆင်ပြေရဲ့လား နေကောင်းရဲ့လား အမြဲတမ်းမေးလေ့ရှိတယ်။ ပြီးတော့ သားငယ်ငယ်တုန်းက သူ့ခြံထဲမှာ သူနဲ့အမြဲတမ်း အချိန်ကုန်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းတွေ တသသနဲ့ ပြောတတ်တယ် ” ဟု သူ့ကို ပြန်ပြောပါသည်။
“ကျွန်တော် သူနေတဲ့ အိမ်အိုကြီးနဲ့ ခြံဝင်းကြီးကို ငယ်ကတည်းက သဘောကျတယ် မေမေ”
“သားသိတဲ့အတိုင်း သားဖေဖေဆုံးပြီးနောက် အန်ကယ် ဘယ်လ်ဆာဟာ သားကို သူရဲ့ တကယ့်သားအရင်းလို စောင့်ရှောက်ခဲ့တာပါ။ သားငယ်ငယ်ကတည်းက သူက သားနဲ့အဖော်လုပ်ပေးပြီး သားကို အသိအမြင်တွေ တိုးတက်အောင် သင်ကြားပေးခဲ့တာပါ။ သားဟာ သူ့ရဲ့ ပဲ့ပြင်ထိန်းကျောင်းမှုနဲ့ လုံးဝ မကင်းခဲ့တာမို့ သားဘ၀မှာ သူ့ရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုက တော်တော် အရေးပါခဲ့တာပါ သားရယ်..”
“ဟုတ်ပါတယ်. မေမေ အန်ကယ် ဘယ်လ်ဆာဟာ သားရဲ့ လက်ဦးဆရာဆို မမှားပါဘူး။ ကျွန်တော် အခုလို စီးပွားရေးနယ်ပယ်မှာ လူတစ်လုံး သူတစ်လုံးအဖြစ် ရပ်တည်နိုင်တာဟာလည်း အန်ကယ်ရဲ့ သင်ပြမှုတွေကြောင့် ဆိုတာ ၀န်ခံပါတယ်.. သူဟာ အချိန်များစွာ အကုန်ခံပြီး ကျွန်တော့်ကို ဘ၀အတွက် အရေးကြီးတဲ့ အချက်တွေ၊ သိသင့်တာတွေ၊ လေ့လာစရာတွေကို သင်ကြားပေးခဲ့တာပါ။ ခုနောက်ပိုင်းတော့ ကျွန်တော်လည်း အလုပ်တွေများလွန်းပြီး အဝေးမှာလည်း ဖြစ်နေတော့ သူ့ကို မေ့နေခဲ့မိတာပါ။ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် မေမေရယ် သား သူ့ရဲ့ အသုဘကို မရောက်ရောက်အောင် လာခဲ့ပါမယ်.. ” ဂျက် မိခင်ဖြစ်သူကို ကတိပေးလိုက်ပြီး တယ်လီဖုန်းကို ပြန်ချလိုက်ကာ အလုပ်လုပ်ဖို့ အာရုံစုစည်းလိုက်သော်လည်း အာရုံတွင် အန်ကယ်ဘယ်လ်ဆာ၏ ပုံရိပ်တို့ကသာ စိုးမိုးလို့နေခဲ့သည်။ သူဘာလို့များ ဟိုယခင်အချိန်တွေတုန်းက အန်ကယ့်ကို သတိမရမိခဲ့ တာပါလိမ့်။
ထိုရက်များတွင် သူ့အလုပ်တွေက မပြီးနိုင် မစီးနိုင်အောင် များလွန်းလှသော်လည်း မေမေကို ပေးခဲ့သော ကတိအတိုင်း နောက်နေ့ လေယာဉ်ဖြင့် သူ့ဇာတိ မွေးရပ်မြေသို့ ထွက်ခွာလာခဲ့သည်။ အန်ကယ် ဘယ်လ်ဆာ၏ အသုဘ အခမ်းအနားမှာ လူအနည်းငယ်သာရှိပြီး တိတ်ဆိတ်ခြောက်ကပ်စွာဖြင့် ပြီးဆုံးသွားခဲ့လေပြီ်။ အန်ကယ်သည် သားထောက် သမီးခံလည်းမရှိ၊ ဆွေမျိုး အနည်းငယ်မှာလည်း ဆုံးပါးသွားခဲ့ကြသည်မှာ ကြာပြီ ဖြစ်သော အထီးကျန်လူသားတစ်ဦးဖြစ်လေသည်။ ဒါကြောင့်မို့လည်း သူ့ကို ခင်တွယ်ခဲ့တာဘဲ ဖြစ်မည် ထင်ပါသည်။ အသုဘချပြီး နောက်တစ်ရက်တွင် လေယာဉ်ဖြင့် သူပြန်မည်ဖြစ်သောကြောင့် သူငယ်စဉ်က သွားလာ ဆော့ကစားခဲ့သော၊ အချိန်များစွာကုန်ဆုံးခဲ့သော အန်ကယ် ဘယ်လ်ဆာ အိမ်ကို နောက်ဆုံးအနေဖြင့် ၀င်ကြည့်ဖို့ စိတ်ကူးရမိကာ သူမပြန်ခင် တစ်ညနေမှာ သူ့မေမေနှင့်အတူ တစ်ဘက်ခြံရှိ အန်ကယ် ဘယ်လ်ဆာ့အိမ်ဘက်သို့ ကူးလာခဲ့ကြသည်။
အိမ်တံခါးရှိရာဆီသို့ လျှောက်လာရင်း သူ့စိတ်ထဲတွင် လက်ရှိကမ္ဘာမှနေပြီး အခြား ကမ္ဘာတစ်ခုခုကို ရောက်သွားမိသလို ခံစားလိုက်ရသည်။ သူ့အာရုံထဲတွင် သူငယ်က ပုံရိပ်များက တစ်ခုချင်းစီ ရုပ်ရှင် အနှေးပြကွက်ဖြင့် ပြနေသလို တစ်ကွက်ခြင်း မြင်ယောင်နေမိသည်။ အိမ်တံခါးကို ဖွင့်ဝင်လိုက်သည်တွင် သူငယ်စဉ် ရောက်နေကျ ပုံစံအတိုင်း အိမ်အပြင်အဆင်က ဘာတစ်ခုမှ ပြောင်းလဲမှုမရှိ။ နံရံပေါ်က ပန်းချီကားများ၊ ဧည့်ခန်းထဲရှိ ပရိဘောဂများ အရာရာအားလုံးသည် နှစ်ကာလများစွာ ကြာသည့်တိုင် ယခင်အတိုင်းသာ ရှိနေခဲ့သည်။ ထိုနေရာများသည် ယခင်က သူ ခြေရာချင်းထပ်အောင် သွားလာ ဆော့ကစားခဲ့သော နေရာများ ဖြစ်ခဲ့လေသည်။ ထိုစဉ် တစ်စုံတစ်ရာ ထူးခြားမှုကို မြင်လိုက်ရသဖြင့် သူ့ခြေလှမ်းတွေ ချက်ခြင်းရပ်တန့်သွားတော့ မေမေက “ ဘာဖြစ်လို့လဲ သား ” ဟု သူ့ကို မေးလိုက်သည်။
“သေတ္တာလေး တစ်လုံး မေမေ” သူပြောလိုက်တော့ “ဘာသေတ္တာလဲ သားရဲ့ ” မေမေက နားမလည်နိုင်စွာ သူ့ကို ပြန်မေးနေလေသည်။ “မဟုတ်ဘူးမေမေ .. ဒီဘီဒိုလေးပေါ်မှာ ဟိုးအရင်ကတည်းက သေတ္တာ အသေးလေးတစ်လုံး ရှိခဲ့တယ် မေမေ.. အဲဒီသေတ္တာလေးကို အန်ကယ်က သော့လေး အမြဲတမ်း ခတ်ထားခဲ့တာ.. အထဲမှာ ဘာတွေရှိလဲလို့ အန်ကယ့်ကို ကျွန်တော် အကြိမ်ပေါင်းများစွာ မေးခဲ့ဖူးတယ်.. မေးတိုင်းလည်း အန်ကယ်က သူတန်ဖိုးအထားဆုံး အရာတွေ ရှိတယ်လို့ ကျွန်တော့်ကို ပြန်ဖြေခဲ့တယ်.. အန်ကယ်က သေတ္တာလေးကို ဒီအပေါ်လေးမှာဘဲ အမြဲတမ်းထားနေကျ… အခု အဲဒီသေတ္တာလေး မတွေ့တော့ဘူး..”
ရှိနေကျ နေရာတွင် သေတ္တာလေးကို မတွေ့တော့သည်ကလွဲ၍ တစ်အိမ်လုံး ရှိသမျှပစ္စည်းများအားလုံးမှာ နေရာပင် မရွေ့ဘဲ ယခင်ကအတိုင်း ဖြစ်သော်လည်း သူ့စိတ်ထဲတွင် တစ်စုံတစ်ရာ လှစ်ဟာနေသလို ခံစားရသည်။ သေတ္တာလေးကို အန်ကယ့်အမျိုးနီးစပ် တစ်ယောက်ယောက်က လာယူသွားသည်ဟုသာ သူ တွေးလိုက်မိတော့သည်။ “အန်ကယ် ဘယ်လ်ဆာရဲ့ ဘ၀မှာ တန်ဖိုးအထားဆုံး အရာဟာ ဘာလဲဆိုတာ သိပ်သိချင်ခဲ့ပေမဲ့ ခုတော့ ကျွန်တော် သိခွင့်မရလိုက်တော့ဘူးပေါ့ မေမေ.. ဘယ်တော့မှလည်း သိခွင့်ရတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး” သူစိတ်ပျက်စွာ ပြောလိုက်ရင်း “ပြန်ကြစို့ မေမေ ကျွန်တော် မနက်အစောကြီး လယာဉ်တက်ရမှာမို့ စောစောအိပ်တော့မယ်”ဟု တစ်ဆက်တည်း ပြောလိုက်ကာ အန်ကယ်ဘယ်လ်ဆာ့ အိမ်ထဲမှ သူတို့သားအမိ ပြန်ထွက်လာခဲ့ကြလေသည်။
သူ မွေးရပ်မြေမှ ပြန်လာပြီး နှစ်ပတ်အကြာတွင် အလုပ်မှ အိမ်သို့ပြန်အလာ သူတို့အိမ်၏ စာတိုက်ပုံးထဲတွင် စာလေးတစ်စောင်ကို တွေ့လိုက်ရပြီး ၄င်းတွင် “လက်မှတ်ထိုးပြီးထုတ်ယူရမည့် ပါဆယ်တစ်ထုတ် လာပို့ကြောင်း၊ အိမ်တွင် လူတစ်ဦးမှ မတွေ့သည့်အတွက် ဗဟိုစာတိုက်ကြီးတွင် နောက်သုံးရက်အတွင်း လာရောက် ထုတ်ယူပါရန်” ဟူ၍ ရေးသားထားသော စာလေးတစ်စောင် ဖြစ်နေလေသည်။ နောက်ရက်တွင် သူ အလုပ်သို့အသွား စာတိုက်ကြီးကို ၀င်ကာ သူ့နံမည်ဖြင့် ရောက်နေသည်ဆိုသော ပါဆယ်ထုတ်ကို လက်မှတ်ထိုး၍ ထုတ်ယူလာခဲ့လေသည်။ ပါဆယ်ထုတ်မှာ အလွန်ပင်ဟောင်းနွမ်းနေပြီး လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ရာချီကတည်းက ပို့ထားလေသလားဟူ၍ပင် တွေးမိလေသည်။ ပါဆယ်ထုတ်ပေါ်မှ လက်ရေးမှာလည်း မပီမသဖြစ်နေပြီး ဖတ်ဖို့ပင် ခက်ခဲလွန်းလှလေသည်။ သို့သော် ပေးပို့သူလိပ်စာ နေရာပေါ်တွင် ရေးထိုးထားသော နံမည်လေးသည် ဂျက်၏ အာရုံအလုံးစုံကို ဖမ်းစားထားလေတော့သည်။
ပေးပို့သူက “မစ္စတာ ဟားရိုးလ် ဘယ်လ်ဆာ ”
သူ ကားပေါ်အရောက်မှာတော့ အချိန်မဆိုင်းဘဲ ပါကင်လေးကို ဆွဲဖြည်လိုက်တော့ အတွင်းမှ ရွှေရောင်သေတ္တာလေး တစ်လုံးကို တွေ့လိုက်ရသည်။ သူမှတ်မိပါပြီ။ ဒီသေတ္တာလေးသည် အန်ကယ့်အိမ်က ဘီဒိုလေးပေါ် အမြဲရှိနေကျ သေတ္တာလေး ဖြစ်ပါသည်။ သေတ္တာနှင့်အတူ စာအိတ်လေးတစ်လုံးကိုလည်း တွေ့ရှိရသောကြောင့် သူ တုန်ရီသော လက်အစုံဖြင့် စာအိတ်ကလေးအား ဖောက်ထုတ်လိုက်ကာ အတွင်းမှ စာရွက်ကို ဆွဲထုတ်ကာ ဖတ်လိုက်သည့် အခါတွင်တော့ “ကျွန်ုပ်သေဆုံးသွားတဲ့တစ်နေ့မှာ ဒီသေတ္တာလေးကို အပေါ်မှာ ရေးထားတဲ့ လိပ်စာရှင် ဂျက် ဘဲန်းနက်ထံသို့ ဆက်ဆက်ပို့ပေးပါ။ ဒီသေတ္တာလေးထဲမှာ ကျွန်ုပ်ဘ၀ တစ်လျှောက်လုံးအတွက် တန်ဖိုး အထားဆုံး အရာတစ်ခု ရှိနေပါတယ်..” ဟု ရေးထားပြီး သော့လေးတစ်ချောင်းကိုလည်း စာအိတ်ထဲတွင် တွေ့ရလေသည်။ သော့လေးကို ကိုင်ပြီး သိချင်စိတ်ပြင်းပြမှုဖြင့် သူ့ရင်ခုန်သံတွေ တစ်ထိတ်ထိတ်နဲ့ မြန်ဆန်လာတော့သည်။
“အထဲမှာ ဘာတွေ ရှိနေမှာပါလိမ့်… သူတစ်သက်လုံး သိချင်ခဲ့တဲ့ အန်ကယ်ဘယ်လ်ဆာရဲ့ တန်ဖိုး အထားဆုံး အရာဟာ ဘာများ ဖြစ်နေမလဲ” စိတ်ထဲ တွေးမိရင်းမှပင် သူ့မျက်ဝန်းမှာ မျက်ရည်များက ရစ်ဖွဲ့လာသည်။ “ အော် တစ်ချိန်တုန်းက အန်ကယ်ဘယ်လ်ဆာဟာ သူ့အတွက် အကောင်းဆုံး ပြုစုပျိုးထောင်ပေးသူ အဖော်ကောင်း တစ်ဦး ဖြစ်ခဲ့သော်လည်း သူအရွယ်ရောက်လာချိန်မှာတော့ အန်ကယ်အတွက် သူဘာတစ်ခုမှ ပြန်လုပ်မပေးဖြစ်ခဲ့ပါ။ အဖော်ကောင်းတစ်ယောက် မဖြစ်နိုင်ခဲ့ပါဘဲလား” သူ့ရင်ထဲမှာ တီးတိုး ပြောနေမိရင်းမှာ ၀မ်းနည်းစိတ်ဖြင့် ရင်ထဲ လှိုက်တက်လာခဲ့သည်။
သူ ဂရုတစိုက်ဖြင့် သေတ္တာလေးကို သေ့ာတံလေးနှင့် ဖွင့်အပြီးတွင် အထဲမှ ထွက်လာသည့်အရာက ရွှေအစစ်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော အိတ်ဆောင်နာရီလေးတစ်လုံး ဖြစ်လေသည်။ တုန်ယင်နေသော သူ့လက်အစုံက ရွှေရောင်နာရီလေးကို ဖွဖွ ထိတွေ့ကိုင်တွယ် ပွတ်သပ်နေမိရင်း သူ့ရဲ့စိတ်အစဉ်မှာ အတိတ်လွင်ပြင်ဆီသို့ တစ်ရိပ်ရိပ် ခရီးနှင်လျှက် ရှိပေပြီ။ “ ငယ်စဉ်ဘ၀က သူနဲ့အန်ကယ်တို့ အတူတူ ကုန်ဆုံးခဲ့သော အချိန်များစွာ အတွက် ခုချိန်မှာ ပြန်လိုချင်သည် ဆိုလျင်ဖြင့်တောင် သူပြန်မရနိုင်တော့ပြီ။ အန်ကယ်ဘယ်လ်ဆာဟာ သူ့အပေါ် ဘယ်လောက်ချစ်ခင် တန်ဖိုးထားတယ် ဆိုတာ ဒီနာရီလေးက သက်သေဘဲ ထင်ပါရဲ့။”
နာရီလေးကို အမြတ်တနိုး ကိုင်တွယ်ထားရင်းက အဖုံးလေးကို ဖြေးညင်းစွာ ဖွင့်ဟလိုက်သောအခါ နာရီအပေါ်ဖုံး၏ အတွင်းမျက်နှာပြင်တွင် ရေးထွင်းထားသော စာသားလေးများမှာ “ ဂျက်.. မင်းရဲ့ အချိန်တွေအတွက် ကျေးဇူး အများကြီးတင်ပါတယ်.. ဟားရိုးလ် ဘယ်လ်ဆာ ” ဆိုသည့် စာလုံးလေးတွေသာ ဖြစ်လေသည်။
“ အိုး.. အန်ကယ် ဘယ်လ်ဆာ တန်ဖိုးအထားဆုံး အရာက ကျွန်တော်ရဲ့ အချိန်တွေတဲ့လား သူတန်ဖိုးထားခဲ့ရတဲ့ ကျွန်တော့်အချိန်တွေအတွက် ကျွန်တော် ဘာတွေများ ပြန်ပေးဆပ်ခဲ့ဖူးပါလိမ့်” တကယ်တမ်းမှာ သူ့အတွက်သာ အန်ကယ်က အချိန်တွေကို အများကြီး ပေးပြီး သူ့ကို ပဲ့ပြင်လမ်းပြခဲ့ခြင်းသာ။ သို့သော် သူကတော့ အန်ကယ်အတွက် သူ့ရဲ့ အချိန်တစ်ချို့ကို ပြန်ပေးခဲ့ရကောင်းမှန်း မသိခဲ့။ ယုတ်စွအဆုံး သူ့ မိသားစုအတွက်ပင် အချိန်မပေးနိုင်ခဲ့မိပါ။ အန်ကယ်ဘယ်လ်ဆာ၏ နာရေးကို သွားခဲ့သည့် အချိန်တွင်ပင်လျင် အိမ်မှာ တစ်ညဘဲအိပ်ခဲ့ပြီး သူ့မိခင်နှင့်ပင် နွေးနွေးထွေးထွေး မနေဖြစ်ခဲ့ပဲ စီးပွားရေးကိစ္စကို ဦးစားပေးကာ အမြန်ဆုံး ပြန်လာခဲ့မိသည်။ တကယ်တမ်းတော့ ကိုယ့်အတွက် အချိန်ပေးခဲ့ကြသူတွေကို ကိုယ်အရွယ်ရောက်လာချိန်မှာ ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ အချိန်တစ်ချို့ကို ပြန်ပြီးပေးသင့်ကြပါသည်. ဒါကို သူတို့တွေသည် သိသိရက်နဲ့ အလုပ်တွေမအားလို့၊ အချိန်မရှိလို့ဆိုသော အကြောင်းပြချက်တွေ တစ်ပုံကြီးနှင့် တမင်အချိန်မပေးဖြစ်ခဲ့သလို၊ အချိန်ပေးဖို့ မေ့လျော့နေခဲ့ကြတာမျိုးလည်း ဖြစ်နိုင်ကြပါသည်။
သူချက်ခြင်းဘဲ ရုံးကို ဖုန်းကောက်ဆက်လိုက်ပြီး “ ဒီတစ်ပတ်အတွင်း ရှိသမျှ အပွိုင့်မဲန့်တွေအားလုံး ဖျက်သိမ်းလိုက်ပါ” ဟု အမိန့်ပေးလိုက်ပါတော့သည်။ “ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆရာ ” တစ်ဘက်က ဖုန်းနားထောင်သော သူ့ရဲ့ အတွင်းရေးမှူးမလေးက နားမလည်နိုင်စွာနှင့် ပြန်မေးသောအခါ “ ငါ ငါ့မိသားစုအတွက် အချိန်ပေးမလို့။ ငါသူတို့ကို ပစ်ထားခဲ့မိတာကြာပြီ။ တကယ်လို့များ သူတို့အထဲက တစ်ယောက်ယောက်ဖြစ်စေ၊ ငါဖြစ်စေ ရုတ်တရက် ကွယ်ပျောက်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင် သူတို့ကို အချိန်မပေးလိုက်ရတဲ့အတွက် ငါနောင်တ မရချင်ဘူး” ထိုစကားကို ပြောလိုက်မိတော့ ရင်ထဲတွင် တင်းကြပ်နေမှုတစ်ချို့ ပြောလျော့သွားခဲ့ရတော့သည်။ ဘ၀ တိုတိုလေးအတွင်းတွင် မိမိချစ်ခင်ရသူတွေကို အချိန်ပေးနိုင်ဖို့လည်း ကြိုးစားသင့်ကြပါသည်။ ထိုသူတို့နဲ့အတူ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် နေထိုင်ခွင့်ရသည့် အချိန်များသည် သူတို့အတွက်ဖြစ်စေ၊ မိမိတို့ အတွက်ဖြစ်စေ တန်ဖိုး မဖြတ်နိုင်သည့် အချိန်တွေသာ ဖြစ်သည် မဟုတ်ပါလားလေ။
What he valued most (Unknown Author) ကို ဘာသာပြန် ခံစားရေးဖွဲ့ပါသည်။